“လက်ထဲက မချချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတဲ့ Mi 5X” - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
Portrait Mode နဲ့ ရိုက်ရတာ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ....?
Design မြင်ရုံနဲ့ မကိုင်ဘဲ မနေချင်လောက် ဖြစ်သွားစေတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi 5X လေး…။ Xiaomi ရဲ့ မော်ဒယ်သစ်လည်းဖြစ်၊ Dual Camera လေးနဲ့ ဆိုတော့ ကိုင်ပြီးရင် မဝယ်ချင်ဘဲ မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ။?
ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ Full Metal Body လေးဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ထဲ ကိုင်ရတာလည်း ပေါ့ပေ့ါပါးပါးလေးရှိပြီး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ကိုင်တွယ်ရတာ စိတ်ဘဝင်ကျစေပါတယ်။
Display ကလည်း IPS LCD ကို မသုံးပဲ LTPS LCD ကို သုံးထားတဲ့အတွက် ဝယ်ရမှာ တန်သွားပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ အရောင်ထွက်ကောင်းပြီး touch လည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ Screen Size ကတော့ ၅.၅ လက်မရှိပါတယ်။ ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ 1920x1080 pixel ရှိတဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mi 5X ရဲ့ ထူးခြားသွားတဲ့ အချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ မေးမေးနေတဲ့ CDMA သုံးလို့ရလားဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ Mi 5X မှာ CDMA ရော GSM ကိုရော အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ GSM ကလည်း 4G Network အထိ အသုံးပြုနိုင်အုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SIM ကဒ်ကတော့ နှစ်ကဒ်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းတွေအရတော့ Mi 5X ကို MIUI9 နဲ့ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ ဆိုခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ MIUI 8.5.5 China Stable နဲ့ ဈေးကွက်ထဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Android version ကတော့ 7.1 (Nougat) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Octa-core Snapdragon 625 SOC နဲ့ RAM4GB နဲ့ဆိုတော့ သုံးရတာ သွက်သွက်လက်လက် ရှိစေမှာပါ။ Performance ပိုင်းကတော့ ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ တန်တယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။ Internal Memory ကလည်း 64GB ဆိုတော့ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ စံတစ်ခု အနေနဲ့ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။
ယနေ့ အချက်အလက် သို့လှောင်နိုင်မှုကလည်း 64GB လောက်မှ အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Memory ပြည့်သွားရင်တောင် SD ကဒ် ထပ်စိုက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်လည်း အလုပ်များပြီး Data အသိမ်းများတဲ့ သူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာ ပိုင်းမှာတော့ Portrait Mode ကတော့ ရှယ်ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ တော်တော် ကောင်းကောင်းလေး ရိုက်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ Mi6 လိုမျိုး Dual Camera ပါဝင်လာပါတယ်။ Dual Camera မြုပ်ထားတဲ့ ပုံစံလေးက အတော်လေး သပ်ရပ်ပါတယ်။ 12MP + 12MP နှစ်လုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ကင်ရာ Manual Mode မှာတော့ Lens အနေနဲ့ Tele ဆွဲပြီး ရိုက်မလား၊ Wide နဲ့ ရိုက်မလားဆိုပြီး ရွေးချယ် ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ Depth of Field ပုံလေးတွေလည်း ခပ်မိုက်မိုက် ရိုက်ကူနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ အရှေ့ Selfie Camera ကတော့ 5MP ရှိပါတယ်။ Magic Mirror လေး သုံးပြီး ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ခပ်ချောချော ပုံလေးတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ?
Group Selfie တွေကို ရှေ့ကင်မရာ သုံးပြီး ရိုက်ရိုက်၊ အနောက်ကင်မရာ သုံးပြီး ရိုက်ရိုက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
MI 5X မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ဘက်ထရီကတော့ i-Ion 3080 mAh battery အမျိုးအစားကို အသုံးပြု တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Fast Battery Charging စနစ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် အားကုန်လို့ ပြန်သွင်းတဲ့အခါ အချိန်ကြာကြာစောင့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
Mi 5X မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ အရောင်တွေကတော့ Black, Gold, Rose Gold ဆိုပြီး အရောင်သုံးမျိုးနဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ 332,000 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ နီးစပ်ရာ ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်တိုင်းမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ဖုန်း 09453344800 သို့လည်း ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
More in this category: « “ ရိုးရှင်း မာကျောတဲ့ Nokia6” Nokia လို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာကို ပြေးမြင်မိသလဲ? (၂)သိန်းဝန်းကျင်ထဲက ကင်မရာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များ »